यी नै हुन् ३ बर्षीय आयुषा तिजको मेला हेर्न गएकी, जंगलमा, मी,x र्त अवस्थामा भेटिइन!!!!!!! – Taja Khawar
यी नै हुन् ३ बर्षीय आयुषा तिजको मेला हेर्न गएकी, जंगलमा, मी,x र्त अवस्थामा भेटिइन!!!!!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ समय: १७:१३:३४
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–२ बाँझकटेरीकी उमा पोख्रेलकी तीन वर्षीया छोरी आयुषा पोख्रेल आइतबार बिहान मृ,x-त भेटिएकी छिन् । शनिबार बालिका छिमेकीकोमा पञ्चमीको पूजामा गएकी थिइन् ।
पूजा सकेर टीका लगाउन खोज्दा बालिका नभेटिएको वडाध्यक्ष माधव भुसालले बताए ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराईका अनुसार घ-टना सम्बन्धमा अ-नुस-न्धान भइरहेको छ ।
बालिकाको अनुहारमा निलो र चि-थो-रे जस्तै दा-ग देखिएका छन् । प्रहरी प्रमुख भट्टराईले प्रारम्भिक अवस्थामा जङ्गली जनावरको आ-क्र-म-ण जस्तो देखिए पनि बालिकाको श-वको पो-स्ट-मा-र्टमसहित अरु अ-नुस-न्धान अगाडि बढाउने बताए ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–२ बाँझकटेरीकी उमा पोख्रेलकी तीन वर्षीया छोरी आयुषा पोख्रेल आइतबार बिहान मृ-त भेटिएकी छिन् ।
शनिबार बालिका छिमेकीकोमा पञ्चमीको पूजामा गएकी थिइन् । पूजा सकेर टीका लगाउन खोज्दा बालिका नभेटिएको वडाध्यक्ष माधव भुसालले बताए ।
काठमाण्डाै – अमेरिकाले बेलायत, ईयू र अरु देशका मानिसलाई प्रवेश गर्न पाउने गरी यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो पारेको छ । नोभेम्बरदेखि पूर्णमात्रा खोप लगाएका विदेशी यात्रु कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेपछि अमेरिका जान पाउनेछन् ।
अमेरिकामा गएको वर्ष सुरुबाटै यात्रासम्बन्धी कडा प्रतिबन्ध कायम छन् । गएको हप्ता ह्वाइटहाउसले प्रतिबन्धहरू नहटाइने बताएको थियो । तर नयाँ नियम घोषणा गरी ह्वाइटहाउसका कोभिड संयोजक जेफ जिन्ट्सले अमेरिका प्रवेश गर्नेहरुका लागि पूर्णमात्रा खोप लगाएको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिलेको नियम अनुसार पछिल्लो १४ दिनभित्र बेलायत, युरोपेली देशहरू, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, इरान र ब्राजिल पुगेका गैर अमेरिकी नागरिकलाई अमेरिका जान रोकिएको थियो । नयाँ नियम अनुसार परीक्षण नेगेटिभ आएको र सम्पर्क विवरण देखाउनुपर्नेछ तर क्वरेण्टीन बस्नुपर्ने छैन ।
नयाँ नियममा अमेरिकाले स्वीकृति दिएका मात्र वा सबै खोपहरूमा लागू हुने हो भन्ने स्पष्ट भइनसकेको बीबीसीले जनाएको छ ।अस्ट्राजेनेका खोप अमेरिकामा स्वीकृत भएको छैन । ह्वाइटहाउसका कोभिड संयोजक जिन्ट्सले त्यसबारे अमेरिकी सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलले निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।
क्यानाडा र मेक्सिकोको जमिनबाट अमेरिका प्रवेश गर्नेहरूका हकमा नयाँ नियम लागू हुने छैन् ।
Last Updated on: September 21st, 2021 at 5:13 pm